Shiinaha Soo-saaraha Birta iyo Alaab-qeybiye | Meesha
Ku tumashada birta waa in la isticmaalo feer oo loo dhinto si loo kala dhantaalo ama loo jajabiyo birta birta ah, birta, aluminium, naxaas iyo taarikada kale iyo walxaha shisheeye si loo gaaro qaab iyo cabir nidaam gaar ah.
Nidaamka shaabbinta waxaa loo qaybin karaa habka kala-soocidda iyo habka sameynta (oo ay ku jiraan foorarinta, sawir qaadista iyo sameynta). Nidaamka kala-soociddu waa in la kala saaro qaybta shaabbada iyo maran iyada oo la raacayo xariiqa xariiqda qaababka shaabadda, iyo tayada qaybta kala go'day ee qaybta shaabaddu waa in ay buuxisaa shuruudaha qaarkood; habka sameynta waa in la sameeyo shaabbadda ba'an ee balaastigga ah ee faaruqa ah iyada oo aan loo eegeynin wax dhaawac ah, oo loo beddelayo qaabka alaabta loo baahan yahay ee la dhammaystiray, iyo sidoo kale in la buuxiyo shuruudaha dulqaadashada cabbirka iyo dhinacyada kale.
* Marka loo eego xaaladaha heerkulka shaambada, waxaa jira laba siyaabood oo lagu dhufto qabow iyo shaabbad kulul. Tani waxay kuxirantahay awooda, balaastigga, dhumucda, heerka cilladaha iyo awooda qalabka ee maaddada, iyo xaalada daaweynta kuleylka ee asalka ah iyo xaalada adeegga ugu dambeysa ee walxaha waa in la tixgeliyaa. 1. Qaboojinta qaboojinta birta heerkulka qolka, guud ahaan lagu dabaqi karo dhumucda wax ka yar 4mm maran. Waxay leedahay faa'iidooyinka kuleylka la'aan, maqaarka oksaydh la'aan, tayada dusha sare ee wanaagsan, hawlgal habboon iyo qiimo jaban. Faa'iido darrada ayaa ah in ay jirto ifafaale adkayn shaqo ah, taas oo ka dhigaysa birta inay lumiso awood-u-lahaansho dheeraad ah. Dhumucda madhan waa isku mid oo xoq looma baahna. 2. Ku tumashada birta kulul waxaa lagu kululeynayaa heer heer kul ah. Faa'iidooyinka ayaa ah inay baabi'in karto buuqa gudaha, iska ilaalin qalafsanaanta shaqada, kordhinta baaxadda maadada, yareynta iska caabinta qaloocinta iyo yareynta isticmaalka awoodda qalabka.
* Waxyaabaha lagu shaabadeeyo
Shaabad bir ah mesh difaaca
Saxan aluminium ah
Sax saxan saxan biraha
* Saddex walxood oo aasaasi ah oo nidaamka wax soo saarka shaabadaysan: dhinta, saxaafadda iyo birta xaashida ah
1. Feerida Die Die waa udhimashada waxsoosaarka shaabbinta. Waxaa jira seddex nooc oo shaabbado dhinta: dhimasho fudud, dhimasho isdaba joog ah iyo dhimasha isku dhafan.
Die Die waa dhinta lama huraanka ah ee wax soo saarka shaabbinta. Waxaa jira seddex nooc oo shaabbado dhinta: dhimasho fudud, dhimasho isdaba joog ah iyo dhimasha isku dhafan.
(1) Fudud fudud: dhimasha fudud waa dhimashad kaliya ku dhameystirta hal geeddi socod hal mar oo saxaafadda ah. Waxay ku habboon tahay wax soo saarka dufcadda yaryar ee qaybaha qaabka fudud.
(2) Dhimasho isdaba-joog ah: hal mar oo saxaafadda ah, dhimashada oo dhammaystirta dhowr geeddi-socod oo lagu dhufto qaybo kala duwan oo ka mid ah isla waqtigaas isla waqtigaas waxaa loo yaqaannaa dhimasho isdaba-joog ah. Dhimashada joogtada ah waxay ku habboon tahay wax soo saarka tooska ah ee wax soo saarka.
(3) Isku-darka u dhinta: istaroog, isla qaybta dhimashada si loo dhammaystiro dhowr geeddi-socod oo shaabbad isku mar ah, oo loo yaqaan dhinta isku-darka. Dhimashadu waxay ku habboon tahay qaybaha shaabbadaha leh soo saar ballaaran iyo saxnaan sare.
Dhimasho joogto ah
2. Mashiinka feerka
Wax soo saarka shaabaddu waa inta badan saxanka. Iyada oo loo marayo caaryada, waxay sameyn kartaa faaruqin, feer, sameynta, sawir, dhammeyn, nadiifin fiican, qaabeyn, riveting iyo extrusion qaybo, iwm, oo si ballaaran loogu isticmaalo meelo kala duwan. Tusaale ahaan, waxaan isticmaalnaa furayaasha, saldhigyada, koobabka, armaajooyinka, suxuunta, kiisaska kumbuyuutarka, xitaa diyaaradaha gantaalada Waxaa jira qalab badan oo lagu soo saari karo feer iyadoo la adeegsanayo caaryada. Waxaa jira noocyo badan oo mashiinno feer ah.
(1) Saxaafadda awoodda farsamada Feer farsamo ayaa istaroog go'an, xawaaraha hagaajin karo iyo wax soo saar hooseeya. Xawaaraha ugu badan 180 jeer / min.
(2) Saxaafadda Haydarooliga
Feerka Haydarooliga wuxuu hagaajin karaa istaroogga shaabbinta isagoo maraya qalabka korantada si loo hagaajiyo wax soo saarka. Xawaaraha ugu sareeya wuxuu gaari karaa 1000 jeer / min. Faa’iido darrooyinka ayaa ah isticmaalka korantada oo sarreeya, shuruudaha sare ee deegaanka iyo culeyska shaqada culus ee dayactirka.
(3) Saxaafadda feedhka turret xakamaynta nambarada
Isticmaalidda mootada adeegga si aad u waddo madaxa, waxsoosaarka ayaa sarreeya, illaa 800 jeer / min. Isticmaalka awoodda ugu yar, dayactirka fudud iyo cabirka yar. Sidaa darteed, si firfircoon ayaa loo adeegsaday.
Shaabinta birta xaashida caadiga ah, badankood waxay adeegsadaan feer farsamo. Marka loo eego dareeraha kala duwan ee loo isticmaalo matoorrada Haydarooliga, waxaa jira matoorro Haydarooliga iyo kuwa haydarooliga ku shaqeeya. Intooda badani waxay adeegsadaan makiinado ay ku shaqeeyaan Haydarooliga, halka matoorrada Haydarooliga inta badan loo isticmaalo mashiinno waaweyn ama gaar ah. Faa'iidooyinka jira awgood, foojignaanta mootada adeegga ayaa si aad iyo aad ah loo adeegsadaa.
Xakamaynta Turret Punch Press
Saxaafadda Aaladda Farsamada
3. Waxyaabaha lagu dhufto Qalabka shaabaddu guud ahaan waa saxan. Qalabka loo soo xulay nashqadeynta wax soo saarka waa inuu la kulmaa waxqabadka sheyga, sida adkaanta, xoogga iyo waxqabadka sheyga. Dhinaca kale, waa inay buuxisaa shuruudaha baaxadda, tayada dusha iyo dhumucda geedi socodka shaabadda. Naqshadeynta qaabdhismeedka qaybaha shaabbadda waa inay si buuxda uga fiirsato astaamaha geeddi-socodka shaabbadda, gacan ka laabanida, godka meelaynta, qaabeynta, qoto-dheereynta sawirada, iwm iyo caabbinta qaab-dhismeedka hooseeya, waxayna ku habboon yihiin shaabad qabow. (1). Biraha Ferrous: SPCC / SPCD / spce, SECC / SECD / sece, SGCC, sgld, Sus (2). Daawaha Aluminium: al1050p, al1100p, al5020 (3). Daawada Copper: Pb naxaas fosfooras ah, HBS naxaas awood sare leh (4). Waxyaabaha loo yaqaan 'Cupro nickel alloy'.
* Teknolojiyada daaweynta dusha sare ee qaybaha shaabad Ka dib markii biraha markii horaba la farsameeyo lana qaabeeyo, waxay u baahan tahay inay wax ka bedesho dusha sare ee birta, qurxiso dusha sare, iyo inay sii bedesho astaamaha farsamada iyo jirka iyo kiimikada ee dusha biraha. Nidaamkan waxaa loo yaqaan daaweynta dusha sare ee biraha. Ujeedada daaweynta dusha sare ee birta ayaa loo qaybiyaa afar qaybood:
(1) Qurux badan
(3) Guryaha gaarka ah ee dusha sare
(4) Hagaajinta qalabka farsamada, sida iska caabbinta, sicirka, iwm.
* Nooca daaweynta dusha sare ee Electroplating (zinc, copper, nickel, chromium, dahab, qalin), xereen electrostatic, rinjiyeynta buufin, electrophoresis, daabacaadda shaashadda xariirta, anodizing, blackening, passivation
* Shaabad ku garaacidda birta waa fududahay in la gaaro waxsoosaar wax-ku-ool ah oo sarreeya iyada oo loo marayo farsamaynta iyo otomatikada si fudud in lagu xaqiijiyo farsameynta iyo otomatiga oo leh waxsoosaar wax soo saar sarreeya; qaybaha shaabbadu waxay leeyihiin cabir sax ah iyo is-weydaarsi wanaagsan; dusha sare waa mid siman oo siman, badiyaa bilaa mishiin. Waxaa si weyn loogu adeegsadaa gawaarida, qalabka korontada, qalabka, duulista iyo warshadaha kale ee wax soo saarka.
Mestech waxay ku siineysaa qaybo bir ah oo lagu shaabadeeyo alaabada iyo adeegyada. Haddii aad u baahan tahay baahi ama aad u baahan tahay inaad wax dheeraad ah ka ogaato, fadlan nala soo xiriir.
Hore: Sida loo doorto soo saaraha caaryada irbaddaada
Xiga: Naqshadaynta guryaha elektarooniga ah
Wax taaj oo kale oo balaastig ah
Elastomer TPS wax taaj oo kale duritaanka wheel